कस्ता यौन आसन मन पराउछन् महिलाहरु (आसन सहित)
माघ २९, २०७४ बिगुल
– डा. सुबोध पोख्रेल सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ ।महिलालाई सबैभन्दा बढी मज्जा दिने सेक्स पोजिसन के -के छन् त :
१. Dog position(कुकुर आसन) पोजिसनबाट महिलाले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउँछन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न उनीहरू एकदमै लालायित हुने देखिएको छ । यसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय सेक्स पोजिसन पनि मानिन्छ । प्रायः महिलाले आफ्नो पुरुष साथीले यही पोजिसनमा सेक्स गरोस भन्ने चाहना राख्छन् ।
२. Cow girl (काउगर्ल पोजिसन): महिलाहरूले रुचाउने अर्को प्रमुख सेक्स पोजिसन भनेको काउगर्ल पोजिसन हो । यो पोजिसनलाई सबैभन्दा सेक्सी पोजिसन पनि भनिन्छ । यो पोजिसनमा महिला पुरुषमाथि रहन्छन् अर्थात् पुरुष तल हुन्छन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न रुचाउने महिलाहरूले आक्रामक सेक्स चाहन्छन् ।
३. eye contact (मिसिनरी पोजिसन): यो पनि महिलाहरूले रुचाउने प्रमुख पोजिसन हो । प्रायःजसो सबै यौनजन्य क्रियाकलाप यही पोजिसनबाट सुरु गरिन्छ भन्ने मान्यता छ । यो पोजिसनमा आई कन्टयाक्टमा महिलाहरू बढी आकषिर्त हुन्छन् ।
४. Spoon (स्पुन्स पोजिसन): यो पोजिसनमा यौनसाथीहरू एक अर्काको साइडमा चम्चा खप्टिएझैं गरी सेक्स क्रियाकलाप गर्छन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा लामो समयसम्म यौनक्रीडामा सहभागी हुन सकिने विश्वास गरिन्छ ।
५. standing (स्ट्यान्डिङ पोजिसन) यो पोजिसन पनि धेरै महिलाले मन पराउँछन् ।
यसमा यौनसाथीहरू दुवै जना उठेर सम्पर्क गर्छन् । महिला उठेर भित्तातिर र्फकने र पुरुष पछाडि हुने यो पोजिसनबाट पनि बढी सन्तुष्टि पाइन्छ।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४११:१५
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने, नखोल्दा के हुन्छ ?
रविसँग कुनै सम्बन्ध छैन भनेकी निकिताले विवाहको कारणबारे यसरी खुलाईन्….
हिजो बोक्सी काट्छु भन्दै हिड्ने सुमनले आज काकीको घाँटी रेटे ! स्वास नली छिनेको कारण मृत्यु !
११ सेकेन्ड अगाडि बिगुल
कांग्रेस सांसदहरुले स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेललाई कब्जामा लिएर धक्याएपछि …
६ मिनेट अगाडि PS
शेयर बजार : सामान्य अङ्कले वृद्धि
१७ मिनेट अगाडि बिगुल
संसदभित्र कांग्रेसको बबण्डर , बाहिरबाट २१ जनालाई प्रहरीले समात्यो !
१७ मिनेट अगाडि PS
सिङ्गापुर उडेको प्लेन भित्र हानाहान भएपछि आकष्मिक अवतरण ! [भिडियो सहित]
२७ मिनेट अगाडि बिगुल
कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेसको विकल्पमा राप्रपा स्थापित भएरै छाड्छ – कमल थापा !
३७ मिनेट अगाडि बिगुल
ट्रक हाँकीरहेका चालकको टाउकोमा एक्कासी ढुङ्गाले लागेपछि …
५१ मिनेट अगाडि PS
२२ घण्टा अगाडि PS
छवि क्याम्पमा रमाउँदै गरेकी शिल्पाको करियर धरापमा !
प्रधानन्यायाधीश राणाको कडा ‘एक्सन’ बारे दिपक राज गिरीको आशावादी टिप्पणी !
सामूहिक बलात्कारबाट १७ वर्षीया युवतीको मृत्यु , ८ जनामध्ये मुख्य अभियुक्त पक्राउ !